PDF ရှာဖွေနည်း | သတင်းပစ္စည်းများ
လော်ရာတောရက်စ်နေရာချထားမှုပုံရိပ် | 12/05/2022 11:21 | ယေဘုယျ, Software များ
အလွန်ရှည်လျားသော PDF တွင် စကားလုံးတစ်လုံးကို ရှာဖွေရန် လိုအပ်သော်လည်း ၎င်းကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သင်မသိပါ။ ၎င်းကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ အခြေခံနည်းပညာကို မေ့လိုက်ပါ၊ စာမျက်နှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားခြင်းဟူသော ဝေါဟာရကို ရှာမတွေ့မချင်း PDF တစ်ခုကို ရှာဖွေရန် မြန်ဆန်လွယ်ကူသော နည်းလမ်းတစ်ခု ရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဤဆောင်းပါးတွင် အဆင့်ဆင့် ရှင်းပြပါမည်။ PDF ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ ဥပမာတစ်ခုဖြင့် ဤတိုးချဲ့မှုပါရှိသော ဖိုင်များတွင် ဝေါဟာရများကို ရှာဖွေရာတွင် အခက်အခဲမရှိစေပါ။
ပွင့်လင်းဖော်မတ်ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ PDF စာရွက်စာတမ်းများသည် ပို၍ အသုံးများလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ကြည့်ရှုသည့် စက်ပစ္စည်းကို မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သင့်ဒီဇိုင်း၏ ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းပါ။- ကွန်ပျူတာ၊ စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက် စသဖြင့်
တခါတရံတွင် အချက်အလက်တစ်ခု အတည်ပြုရန်၊ အရေးကြီးသော အချက်အလက်ကို ရှာဖွေရန် သို့မဟုတ် မစပ်စုမိစေရန် PDF ဖိုင်တစ်ခုတွင် စကားလုံးတစ်လုံးကို သင်ရှာဖွေရန် လိုအပ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် မြန်ဆန်လွယ်ကူသည်။
PDF တွင် စကားလုံးများကို ရှာဖွေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားဝင် Adobe အပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုပါမည်။ PDF format ကိုတီထွင်တဲ့ကုမ္ပဏီ. Adobe Acrobat Reader DC သည် ထိရောက်သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုပါ၀င်သည့် အခမဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည့် စပိန်ဘာသာစကားလည်းဖြစ်သည်။
1 သင်မစတင်မီ- ပရိုဂရမ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
1.1 ပထမအဆင့်- စကားလုံးတစ်လုံး သို့မဟုတ် စကားလုံးများအတွက် PDF ကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။
1.2 ဒုတိယအဆင့်- ပိုမိုတိကျသောရှာဖွေမှု
2 PDF စာရွက်စာတမ်းများစွာတွင် စာသားကို ရှာပါ။
2.1 ဖိုင်များစွာကို တစ်ပြိုင်နက် ရှာဖွေပါ- လိုက်နာရမည့် အဆင့်များ
3 ရှာဖွေမှုရလဒ်များကို မည်သို့သုံးသပ်ပြီး သိမ်းဆည်းနိုင်မည်နည်း။
သင်မစတင်မီ- ပရိုဂရမ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
PDF ဖတ်နိုင်သော ပရိုဂရမ်တစ်ခုမျှ မရှိပါက ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ Acrobat Reader ကို DC က သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်မှ ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းသည် McAffee ဆန့်ကျင်ဗိုင်းရပ်စ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းသောကြောင့် သတိထားပါ။ စိတ်မဝင်စားပါက ဤရွေးချယ်မှုကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပါ။
ပရိုဂရမ်ကိုထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်၊ သို့သွားပါ။ မီနူး archive ကို PDF ကိုဖွင့်ပါ။ သင်ရှာဖွေလိုသောနေရာ။ အချိန်အများစုတွင်၊ စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်၊ စာရွက်စာတမ်းကို သင်နှိပ်လိုက်သောအခါတွင် Acrobat Reader DC ဖြင့် ဖိုင်သည် အလိုအလျောက်ပွင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ပထမအဆင့်- စကားလုံးတစ်လုံး သို့မဟုတ် စကားလုံးများအတွက် PDF ကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။
ထို့နောက် ထိပ်တန်းမီနူးသို့ သွားရပါမည်။ ပြင်ဆင်ရန် option ကိုနှိပ်ပါ။ ရှာဖှေ မှန်ပြောင်း သင်္ကေတဘေးမှာ။ နောက်ထပ်ပိုမိုမြန်ဆန်သောနည်းလမ်းမှာ သင်နှစ်သက်ပါက ကီးဘုတ်အမိန့်များကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
commands များကိုနှိပ်ပါ။ CTRL + F ကို သငျသညျ Windows ကိုအသုံးပြုနေလျှင်သို့မဟုတ် CMD + F အကယ်၍ သင်သည် Mac ကို အသုံးပြုနေပါက သင်ရှာဖွေလိုသော စကားလုံးကို ရိုက်ထည့်နိုင်သည့် ရှာဖွေမှု ဝင်းဒိုးတစ်ခု ပွင့်လာပါမည်။ ဤအမိန့်ကို မှတ်မိရန်၊ အင်္ဂလိပ် ရှာဖွေမှု ဝေါဟာရကို သင်စဉ်းစားနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် စကားလုံး၏ ပထမအက္ခရာသည် CTRL နှင့် တွဲထားသည်။
ပိုမိုအသေးစိတ်ရှာဖွေရန်အတွက် နှိပ်ပါ။ CTRL + Shift + F Windows သို့မဟုတ် CMD + Shift + F Mac တွင်၊ ၎င်းသည်ဖွင့်လိမ့်မည်။ အဆင့်မြင့်ရှာဖွေရေး:
*”Shift” သည် မြှားအတက်သင်္ကေတပါရှိသော စာလုံးအကြီးတစ်လုံးကိုရိုက်ရန် သင်အသုံးပြုသည့်သော့ကို ရည်ညွှန်းသည်။ Ctrl ၏အထက်တွင်ရှိသောသော့။
ဒီမှာ လက်ရှိဖိုင်တွဲတင်မဟုတ်ဘဲ သီးခြားဖိုင်တွဲတစ်ခုတွင် PDF စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။. စကားလုံးများ၊ စာညှပ်များနှင့် မှတ်ချက်များအားလုံးကိုပင် ရှာဖွေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် စာလုံးကြီးနှင့် စာလုံးငယ်များကို တိုက်ဆိုင်လိုပါက ညွှန်ပြရန် checkbox တစ်ခုရှိသည်။
PDF စာရွက်စာတမ်းများစွာတွင် စာသားကို ရှာပါ။
Acrobat Adobe PDF သည် နောက်ထပ်တစ်လှမ်း၊ စာရွက်စာတမ်းများစွာကို တစ်ပြိုင်နက် ရှာဖွေနိုင်သည်။. ရှာဖွေရေးဝင်းဒိုးသည် သင့်အား PDF ဖိုင်အများအပြားတွင် စကားလုံးများကို တစ်ပြိုင်နက် ရှာဖွေနိုင်စေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် PDF စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို ရှာဖွေနိုင်သည် သို့မဟုတ် PDF Portfolios ကို သီးခြားတည်နေရာတစ်ခုတွင် ဖွင့်နိုင်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကို ကုဒ်ဝှက်ထားမည်ဆိုပါက (လုံခြုံရေးအစီအမံများကို အသုံးပြုထားသည်)၊ ၎င်းတို့ကို ရှာဖွေမှုတွင် ထည့်သွင်းမရနိုင်ကြောင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဖိုင်တစ်ခုချင်းစီကို ရှာဖွေရန် ဤစာရွက်စာတမ်းများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖွင့်ရပါမည်။ သို့ရာတွင်၊ Adobe Digital Editions အဖြစ် ကုဒ်လုပ်ထားသော စာရွက်စာတမ်းများသည် ဤစည်းမျဉ်း၏ ခြွင်းချက်ဖြစ်ပြီး ရှာဖွေရန် စာရွက်စာတမ်းများအုပ်စုတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အဲဒါပြီးရင် အဲဒီကို သွားမယ်။
ဖိုင်များစွာကို တစ်ပြိုင်နက် ရှာဖွေပါ- လိုက်နာရမည့် အဆင့်များ
Desktop ပေါ်တွင် Acrobat ကိုဖွင့်ပါ။ (ဝဘ်ဘရောက်ဆာတွင်မဟုတ်ပါ)။
အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များထဲမှ တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပါ။- ရှာဖွေရေးကိရိယာဘားတွင်သင်ရှာဖွေလိုသော စာသားကို ရိုက်ထည့်ပါ၊ ထို့နောက် ရွေးချယ်ပါ။ ဖွင့်လှစ် ပြီးပြည့်စုံသောရှာဖွေမှု ပေါ်လာသောမီနူးရှိ Acrobat ၏ search box တွင်သင်ရှာဖွေလိုသော စာသားကို ရိုက်ထည့်ပါ။
ဤဝင်းဒိုးတွင်၊ PDF စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို ရွေးပါ။ ရွေးချယ်စရာအောက်ရှိ ပေါ့ပ်အပ်မီနူးတွင်၊ ရွေးချယ်ပါ။ ဘယ်မှာရှာမလဲ။.
တည်နေရာကို ရွေးချယ်ပါ။ သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်တစ်ခုပေါ်တွင် နှိပ်ပါ။ accept.
နောက်ထပ်ရှာဖွေမှုစံနှုန်းများကို သတ်မှတ်ရန်ကိုနှိပ်ပါ Show ကိုအဆင့်မြင့် Options များ နှင့် သင့်လျော်သော ရွေးချယ်မှုများကို သတ်မှတ်ပါ။
အကြံပြုချက်အနေဖြင့်၊ ရှာဖွေနေစဉ်အတွင်း သင်သည် ရလဒ်များကို နှိပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ရှာဖွေမှုကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲ ရလဒ်များတစ်လျှောက် လှိမ့်ရန် ကီးဘုတ်အမိန့်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ခလုတ်ကိုနှိပ်ရင်၊ ရပ်ပါ တိုးတက်မှုဘားအောက်တွင်၊ ရှာဖွေမှုကို ပယ်ဖျက်ပြီး ရလဒ်များကို ယခုအချိန်အထိ တွေ့ရှိရသည့် အဖြစ်အပျက်များအတွက် ကန့်သတ်ထားသည်။ ရှာဖွေမှု ဝင်းဒိုးသည် မပိတ်ဘဲ ရလဒ်များစာရင်းကို မရှင်းလင်းပါ။. ထို့ကြောင့်၊ ရလဒ်များကို ပိုမိုကြည့်ရှုရန်၊ ရှာဖွေမှုအသစ်တစ်ခု လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။
ရှာဖွေမှုရလဒ်များကို မည်သို့သုံးသပ်ပြီး သိမ်းဆည်းနိုင်မည်နည်း။
ရှာဖွေမှု ဝင်းဒိုးမှ ရှာဖွေမှုတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပြီးနောက်၊ ရလဒ်များကို ရှာဖွေထားသည့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုစီ၏ အမည်အောက်တွင် ပြန်လည်စုဖွဲ့ကာ စာမျက်နှာ အစဉ်အတိုင်း ပြသမည်ဖြစ်သည်။ စာရင်းရှိ အကြောင်းအရာတစ်ခုစီတွင် ဆက်စပ်စကားလုံး (အသုံးပြုပါက) နှင့် ဖြစ်ပွားမှုအမျိုးအစားကို ညွှန်ပြသည့် အိုင်ကွန်တစ်ခု ပါဝင်သည်။
ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင် သီးခြားဥပမာတစ်ခုသို့ ခုန်ပါ။. တစ်ဦးချင်းစီ PDF များတွင်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
- လိုအပ်ပါက ရှာဖွေမှုရလဒ်များကို ချဲ့ထွင်ပါ။ ထို့နောက် PDF တွင်ကြည့်ရှုရန်ရလဒ်များရှိဥပမာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
- အခြားဖြစ်ရပ်များကိုကြည့်ရှုရန်၊ ရလဒ်များ၏အခြားဥပမာကိုနှိပ်ပါ။
ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင် ဥပမာများကို စီပါ။ မီနူး option ကိုရွေးချယ်ပါ။ ခဏ ရှာဖွေရေးဝင်းဒိုး၏အောက်ခြေတွင်။ ဆက်စပ်မှု၊ ပြင်ဆင်ထားသော ရက်စွဲ၊ ဖိုင်အမည် သို့မဟုတ် တည်နေရာဖြင့် ရလဒ်များကို စီစဥ်နိုင်သည်။
ရှာဖွေမှုရလဒ်များကို သိမ်းဆည်းပါ။ သင်၏ရှာဖွေမှုရလဒ်များကို PDF သို့မဟုတ် CSV ဖိုင်အဖြစ် သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ CSV ဖိုင်ကို ဇယားတစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် ၎င်းကိုဖွင့်ရန်အတွက် Excel ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြင့် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အပြီးသတ်ရန်၊ အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ။ ဓာတ်ပြား ရလဒ်များကို PDF အဖြစ် သိမ်းဆည်းရန် သို့မဟုတ် ရလဒ်များကို CSV အဖြစ် သိမ်းဆည်းရန် ရွေးချယ်ပါ။
ဒီအချက်အလက်က သင့်အတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်၊ မြင်တဲ့အတိုင်း PDF ထဲမှာ စကားလုံးတွေကို ရှာရတာ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » PDF တွင်ရှာဖွေခြင်း